175 ~ 230 Kyats
Ayar Chantha Condominum
ဧရာချမ်းသာအိမ်ရာစီမံကိန်းသည် ချမ်းသာရွှေမြေ ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ယူဆောက်လုပ်ပြီး ဧရာဝဏ်လမ်းမကြီးဘေး ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့တွင်တည်ရှိပါသည်။ ဧရာချမ်းသာအိမ်ရာသည် ရန်ကုန်မြို့တွင်းနှင့် အနီးဆုံး တစ်ခုတ ည်းသော မြို့ပြအိမ်ရာဖြစ်ပါသည်။ ၂၄ နာရီမီးအားပေးစနစ်၊ ဓါတ်လှေ ကား၊ အပါ အ၀င် သီးခြားကားပါကင်အဆောက်အဦးများ၊ အဆင့်မြင့် ရေကူးကန်များ၊ Community Center များ ၊ စိမ်းလန်းစိုပြည်သောဖန်တီးမှု များနှင့် ကလေး၊ လူကြီးကစားကွင်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ဧရာချမ်းသာအဆင့်မြင့်အိမ်ရာစီမံကိန်းအနှီးပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဆေးရုံ၊ ကျောင်း ၊လိုင်းပေါင်းစုံဘတ်(စ်)ကားများလည်း ပေါ်ထွက်လာဦးမည်ဖြစ်ပါသည်။ မြို့ပြလူနေထိုင်မှုစနစ်နှင့်အညီ တည်ဆောက်ထားခြင်းတို့ကြောင့်လူကြီးမင်းတို့သင့်တင့်မျှတသောဈေးနှုန်းတစ်ခုဖြင့် လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားစွာနေထိုင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။Site Office ကိုလည်းပိတ်ရက်မရှိဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။
Topcon GR-5 UHF Dual Base &amp; Rover Kit
The Topcon GR-5 receiver is the next step in the continuing development of the latest, most advanced receiver technology available. Building from the tremendous success of the world’ s first G3 RTK receiver, the Topcon GR-3, the new GR-5 provides the latest technological advancements with the same powerful performance.
Toe Wah ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့ အတွက် လူကြီးမင်းတို့ အတွက် Stainless Steel Stair လှေကားလက်တန်းများကို လူကြီးမင်းတို့ ၏ အိမ်လှေကားများတွင် တပ်ဆင်အလှဆင်နိုင် ရန် ထုတ်လုပ်ဖြန့် ဖြူးရောင်းချလျက်ရှိပါသည်။ဒါ့ပြင်လူကြီးမင်းတို့ ၏ အိမ်လှေကားလက် တန်းများကို လူကြီးမင်းတို့ စိတ်ကြိုက် Stainless Steel Stair ကို လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် အသုံးပြုအလှဆင်နိုင်ပါသည်။၄င်း လှေကား ဒီဇိုင်းများသည် လှပသေသပ်ပီး ကြာရှည်အ သုံးခံပါသည်။ ဒါ့ကြောင့်လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် အိမ်အဆောက်အဦးလှေကား ဒီဇိုင်းများ ကို လှပပီး ဒီဇိုင်းဆန်သော Stainless Steel Stair များကို အသုံးပြုလိုပါက Toe Wah ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ပါသည်။
Chantha Gonyaung Condo
လွယ်ကူသော ငွေပေးချေမှုဖြင့် အိမ်တစ်လုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်မည့် လက်လွတ်မခံသင့်သော အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေး။ ယခုသတ်မှတ်ထားသော နှစ်ရှည်အရစ်ကျ ငွေပေးသွင်းသောစနစ်သည် လစဉ်အိမ်ခန်းငှားခအတွက် ကုန်ကျရမည့် ငွေပမာဏမျှဖြင့် လူတိုင်းအိမ်ခန်းပိုင်ဆိုင်နိုင်မည့် အခွင့်အရေး။ သီလ၀ါ ရေနက်ဆိပ်ကမ်းအထူးစီးပွားရေးဇုန်နှင့်အနီးဆုံး အဆင့်မြင့်အိမ်ရာဖြစ်၍ ရင်းနှီးမြုပ်နှံရန် အကောင်းဆုံး။ အခန်းများကိုလည်း ပြန်လည်ငှားရမ်းနိုင်ခြင့်းတို့ကြောင့် Customer များအနေဖြင့် လက်လွတ်မခံသင့်သော အိမ်ရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
15000 ~ 20000 Kyats
Myat Thitsar ကုမ္ပ္ပဏီမှာ Film Faced plywood များလည်းတင်သွင်းရောင်းချ ဖြန့် ချီလျက် ရှိပါသည်။Film Faced plywood သည် မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပုံရိပ်ကလေးများပါသောကြောင့် လှပသောဒီဇိုင်းလေးတခုလည်းဖြစ်ပါသည်။Film Faced plywood သည် ရေစိုခံနိုင်သော အစွမ်းသတ္တိရှိပြီး ပေါ့ပါးကျစ်လျစ်သပ်ရပ်လှပါသည်။အရည်အသွေးမြင့်သော ရေစိုခံဆေး သုတ်ထားသောကြောင့် ကြာ ရှည်လည်းခံသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ လွယ်ကူလှပါသည်။လူကြီးမင်း တို့ အနေဖြင့် အိမ်တွင်းအလှဆင်၊အခန်းအလှဆင်၊ဘီဒို၊စားပွဲ၊ခုံ၊ကုတင်စသည့်တို့ ကိုစိတ် တိုင်းကျအလှဆင်ရန် Myat Thitsar ကုမ္ပဏီကိုဆက်သွယ်မှာ ယူနိုင်ပါသည်။